Nguo dzeyambiro → Mbatya dzekusimudzira
Kushambadzira yambiro zvipfeko zvinowanzo kuve zvakatsaurirwa kunzvimbo dzebasa nenzvimbo dzeruzhinji. Kamizelki Ivo zvakare vanosarudzwa nevarongi veimwe mitambo yemitambo kana nemakirabhu, kunyanya uko nzvimbo yekutora chikamu muchiitiko ichi nzvimbo yeruzhinji, senge mabhasikoro emabhasikoro kana marathoni evamhanyi.
Yakakwirira-kuoneka zvipfeko zvebasa nemitambo
Mauri shopu mubhukumaki "Kushambadzira zvipfeko - yambiro yekupfeka"Isu tinopa mamodheru ane akakodzera mashandiro ekuita, nekuda kwekuti ivo vanochengeta yavo yekutanga basa kwenguva yakareba, zvichibatsira kuwedzera kuoneka munguva yemanheru nekuda kwemaronda anoratidza.
Isu tinoshandisa matekinoroji emazuva ano kugadzira zvinyorwa, nekuti isu tinoda kuona, mukuwedzera pakachengeteka, chitarisiko chinoyevedza, asi zvakare kuwedzera kusimba.
Pakati pezvakakwirira-zvinooneka zvipfeko, isu tinonyanya kupa mavhenekeri ekuratidzira kwete evakuru chete mune unisex vhezheni, asiwo yevana. Mhando dziripo dzese dzakasungirirwa nekuiswa pamusoro pemusoro. Nekuda kwehuremu hwavo hwakareruka, zviri nyore kushandisa. Ini ndinogona kushandiswa mune chero mamiriro ekunze, zvese zhizha nechando. Kutenda kune zvivakwa zvayo, izvo zvinhu zvinoenderana nemushandisi, izvo zvinovatendera kuti zvive nyore kusanganiswa nazvo hoodie, bhachi kana Polo shati.
Makwikwi mitengo, yega dhizaini
Imwe yemabhenefiti akakura kuve kukwikwidza mutengo wakaderera. Kuitwa kweprojekiti uye ipapo kugadzirwa kwayo nekuda kwemitengo yakaderera ichave mhinduro chaiyo kune avo vane hanya nemutengo wakaderera kana vane bhajeti diki.
Kugadzira nekusona kushambadza yambiro zvipfeko haifaniri kuita mari yakawanda, iyo ndeyechokwadi yekufadza avo vane bhajeti rakaomarara.
Mikana yekuwedzera kumaka mbatya ne kombasi yemakomputa kana kudhinda screen inobvumira munhu akazvimiririra.
Izvi zvinonyanya kukosha kana mushandisi ari pakati pevamiriri vemamwe makambani, masangano - p.k. Kuramba kweabrasion kunoreva kuti ivo vacharamba vakamira kwenguva refu. Hunhu hwakadai huchave nemhedzisiro yakanaka pamaonero echiratidzo.
inoratidzira zipped sweatshirtVhetivesti yambiroT-shati inoratidzabhachi rinoratidzayambiro zvipfeko zvekudzivirirakukwirira-kuoneka zvipfekoallegro zvipfeko zvinoonekera zvakanyanyakukwirira-kuoneka zvipfekoyakakwira-kuoneka zvipfeko ciopyambiro zvipfeko zvevatyairikukwirira kuoneka kwepamusoro kuoneka zvipfekoyakakwira-kuoneka inoratidza zvipfekombatya dzemvere dzemhando yepamusoroyakakwira-inooneka yekugadzira mbatyayakakwira-kuoneka zvipfeko warsawyepamusoro-kuoneka zvipfeko zvine anodhindayakakwira-kuoneka mbatya dzebasayakakwirira-kuoneka mbatya dzebasayambiro tepi yezvokupfeka 3minoratidzira yambiro tepi ye3m zvipfeko
5 / 5 ( 11 mavhoti )